लिग च्याम्पियन को बन्ने मछिन्द्र कि सेना ? - Subhay Postलिग च्याम्पियन को बन्ने मछिन्द्र कि सेना ? - Subhay Post
लिग च्याम्पियन को बन्ने मछिन्द्र कि सेना ?
काठमाडौं/ सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको च्यम्पियन को बन्नेछ भन्ने आजको अन्तिम खेलले निर्धारण गर्नेछ ।
सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र मछिन्द्र फूटबल क्लब दुबै यस लिगका उपाधिका दावेदार हुन् । आजको खेल फाइनल खेल जस्तै हुनेछ । शिर्ष स्थानको सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबको २९ अङ्क छ । दोस्रो स्थानमा मच्छिन्द्र युथ क्लबको २८ अंक रहेको छ । उपाधिको लागि शनिबार दशरथ रङ्गशालामा आज शनिबार भिड्दैछन् । खेल अपरान्ह दुई बजेबाट हुनेछ ।
उपाधी जित्न आर्मीलाई बराबरी नैं पर्याप्त हुनेछ भने मछिन्द्रलाई जीत नै आवश्यक छ ।
लिग उपाधी हात पार्ने लक्षका साथ उतारिएको मछिन्द्र क्लबका अध्यक्ष प्रबोध कसा: आफ्नो क्लबले खेल जितेर उपाधी रक्षा गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछन् । आफ्नो टीमको लक्ष्य नै लिग उपाधी हात पार्नु हो उनले भने खेल हो हारजीत त भैरहन्छ तर आज हामीले जितेर देखाउने पर्छ ।”
मछिन्द्रका समर्थकहरु एन्फाले मछिन्द्रलाई उपाधी हात पार्न नदिन केही खेलमा खेल स्थान परिवर्तन र खराब मौसमका कारण रोकिने भनेको खेल पनि नरोकी खेलाएर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँछन् । हिमालयन शेर्पासँगको खेल बर्षाका कारण दशरथ रंगशालामा स्थगित गरेपनि एन्फा कम्लेक्समा लगेर खेलाएको र जीत निस्चित हुने खेल पनि जाडोले खेलाडीहरु राम्रोसँग खेल्न नसकेपछि खेल गुमाउनु परेको घट्ना उनीहरूले सुनाए ।
जे होस् आजको खेल फूटबल लिगको लागि नयाँ इतिहास हुनेछ । यसपटक सरस्वती क्लब भने रेलिगेशनमा परिसकेको छ ।शुक्रबार च्यासललाई हराएर थ्री स्टार १३ खेलबाट २६ अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।